Magdhow shiinuhu ma bixindoona - Land Of Punt
Hay’adaha Sirdoonka ee CIA iyo M16 oo soo ururiyay macluumaad bartilmaameed ka dhiganaya dalka shiinaha qarintii uu qariyay caabuqa Covid-19, iyada oo reer galbeedku diyaar u yihiin inay shiinaha ka dalbadaan magdhaw.
Reer galbeedku waxay rabaan in ay eedda iyo khasaarihii uu geystay xanuunka Covid-19 dusha uga tuuraan shiinaha iyada oo ay warbixintan 15-bog ah ay soo ururiyeen hay’adaha sirdoonka ayaa hadda u gudubtay saxaafadda.
Warbixintan waxa diyaariyay wadamadda reer galbeedka ee walaaca ka muujinaya xanuunka karoonafayrus, sida uu sheegayo wargayska ka soo baxa Australia ee The Sunday Telegraph. Waxa ku xusan warbxinta in shanta hay’adood sirdoon “five Eyes” ee wadamadan United States,Australia,New Zealand,Canada iyo UK ay baadhitaano ku wadaan shiinaha.
Qorayaasha daraasadkan waxa ay ogaadeen inay jiraan habab badan oo layaab leh oo shaki gelinaysa qaabki uu uga jawaabay shiinuhu markii uu dillaacay caabuqani iyaga oo tilmaamay inay aad u xumayd falalkii uu ku kacay shiinuhu. Tusaale ahaan, taa marka laga yimaado warbixintani waxa ay cuskanaysaa daraasad balaadhan oo sheegtay in fayraska karoonada lagu sameeyay Lab.
Laakiin saynisyahanadu waxa ay isku raaceen in aanay taasi jirin, halka sirdoonka maraykanku uu isna ku raacasanyahay mawqifkan. Daraasaddan qudheeda waa la iska tuuray waayo may jirin cadaymo cad oo ay soo bandhigtay daraasadu, sida uu sheegayo qoraaga Botao Xiao oo dhinac ah. Hase ahaate, warbxintan dhaleecaynaysa shiinaha ayaa noqotay mid xiiso gaar ah leh siday u muuqato.
Qaybo badan oo ka mida warbixintani waxa ay xooga saaraysaa machadka barashada fayraska ee Wuhan Institute of Virology iyo mid ka mid ah cilmi-baadhaayaasha ugu sareeya machadkan ee Shi Zhengli oo aqoon aad u xeel dheer u leh xanuunka sida karoonafayruska ah ee SARS iyo shimbirta fiidmeerta la yidhaa ee marti gelisaa fayraska caabuqan.
Waxa ay u eegtahay in warbixintan ujeedkeedu aanu ahayn in ay ogaato fayras-yada la xidhiidha shimbirta fiidmeerta laakiin waa aragtida ah in fayraskani uu kasoo baxsaday Lab.
Sida oo kale waxa ku xusan warbixintan in Dr Shi uu ku hawlanaa daraasado baadhis ah suurto galnimada isbed-bedelka walxaha keena xanuunka inuu si dabiici ah u dhici karo kana dhigaya kuwo aad khatar ugu leh aadamaha. Arinta fayruska ee la tuhunsanyahay Lab gudihii in lagu farsameeyey waxa keenaysaa u diyaar garow cudur suuro gal ah inuu faafo iyadoo daraasaddaha noocan ah ee khatarta badan inay mudan tahay samaynteedu iyo inkale aad looga doodi doono mustaqbalka.
Ka waran haddii shiinuhu uu lumiyey maamulkii iyo xakamyntii mid ka mida laababkiisa ugu halista badan ka dibna uu isku dayey wax kasta oo uu awoodo siduu u qarin laha ayaa kamid ah eedaynta reer galbeedka.
Eedayntan aan cadaymahaa adag haysan ayaa ka dhigaysa warbixintan mid la dhaleeceeyo. Waxa ay ku andacoonayaan in shiinuhu ku hawlanaa xakamaynta iyo baabi’inta cadaymaha ay ku jiraan nadiifinta suuqii xayawaanka ee Wuhan oo la aaminsayahay in uu yahay bartii uu ka bilaabmay xanuunku. Sidoo kale shiinaha waxa lagu eedeeyey laba-wajiilanimo sababta oo ah waxa uu ku soo ragay xayiraad isku socodkii gudaha ee gobolka Hubei isaga oo aan xayirin duulimaadyada caalamigaa.
“Malaayiin qof ayaa ka tegay magaalada Wuhan markii uu dillaacay caabuqu halka ay dawladuna bilawday bandawga 23-kii bishii January” ayaa ay warbixintu sheegaysa sida uu yidhi wargayski. “Kumanaan qof aya u duulay dibadaha intii lagu jiray bishii labaad, dawlada shiinuhu waxay ku caadinaysay wadamada US,Italy,Australia iyo wadana koonfurata barri Asia iyo wadamo kalaba in aanay isku ilaalin Karin xayiraada isku socodka halka shiinaha gudihiisa si si aad ah loo mamnuucay isku socodkii”.
Warbixintan oo dustay warbaahinta ayaan weli la shaacin. Hase ahaate dhawaaqa xiisaha leh ee laga soo xiganayo wargasyka Telegraph iyo raadadka fog caawaaqibka xun leh ee shiinuhu ku kacay inay tahay qiimaynta sirdoon sumcad leh iyo xog saraakiil aan la magaacaabin u gudbiyeen warbaahinta, dabeecaddan oo ah udub dhexaadka siyaasadda arimaha dibadda ee reer galbeedka tobanaanki sano ee ina soo dhaafay. Ma xasuusata Saddam Hussein in uu si qarsoodi ah u haystay maadadda Yellowcake Uranium uuna diyaar u ahaa in uu ku duqeeyo yurub gantaalihisa muddo 45 daqiiqadood ah? Oo beenowday. Waxaynu ka warsugaynaa soo shaac bixida waar lagu bartil maameed sanaayo ee ah in China eeda karoonada yeelandoono oo markaa diyaar u ahaan doono inuu magdhow ka bixiyo.
carona Caronavirus china karoonafayrus magdhow reer galbeed
Shaam Suldaan says:
Waa iskuday guushiisu ay aad u hoosayso , sababtana waxa ay ila tahay laba Qodob uun :
1: Shiinaha oo aan ahayn mid lamida Sadaam Xuseenkii lagu wanjalay waxaanu haysan, balse ah Awood u bahacdhigi karta Mu’amaradaha Reer Galbeedka
2 : Dunida oo oh Xifaaltanka iyo Loolanka Hogaamineed ee ka dhaxeeya Shiinaha iyo Reer Galbeedka . taas oo kasoo qaadaysa eedayn kaste mi siyaasadaysan